I-Spirulina Archive - Amalungelo Abantu Nobuciko Bokukhanya ngu-∴ PixelHELPER Foundation
Imitha engu-15 yemitha yekhamera ye-hydraulic ngemuva nenhloko yekhamera engu-360 degree ne-WiFi
Okubi kakhulu ukuthi kunamapulazi ambalwa kakhulu angatshalwanga ngeminqumo kuze kube phezulu, kodwa anendawo evulekile enogesi namanzi.
Izibalo zamanje kanye nokutshalwa kwemali
11.05.18/XNUMX/XNUMX Defender & Caravan ukugcina izindleko ziphansi ngangokunokwenzeka e-Afrika
Izindawo zokuqala zokusakaza bukhoma yiSenegal, iPalestine kanye nehabhu lethu laseYurophu eMorocco. I-PixelHELPER ifuna ukuhlinzeka wonke amanye amazwe ngosizo lwezenhlalo kusuka endaweni yalo eMorocco. Endleleni eya eMadagascar, sifuna ukufaka okungenani indawo eyodwa yokuxhumana bukhoma kuwo wonke amazwe. Izindawo ezisakazwa bukhoma kufanele zihlele amathuba emisebenzi njengepulazi le-algae futhi zikhiqize imikhiqizo kanye nababaleki ukuze zibanikeze ikusasa elihle ezwenikazi lase-Afrika. Konke ekusakazeni bukhoma, uhlala ukhona futhi unqume ukuthi kwenzekani. Yonke indawo ikhonjiswa ekusakazeni bukhoma emini, ithelevishini exhumanayo ngenhloso yokuthuthukisa umhlaba ngosizo lwezinkumbi. EMadagascar sifuna ukusebenzisa i-phage therapy yaseGeorgia esizeni ukuvikela abantu esifo sofuba esiqubuka lapho minyaka yonke. Ngenkolo yabafileyo, izakhamizi zakulesi siqhingi zihlangana namagciwane abulala izigidi zabantu eYurophu ngeNkathi Ephakathi.
Ngokobuchwepheshe kusebenza kanjena ukuthi siqale ukusakaza bukhoma ngezinto ezisobala zokulawula bese simema abasebenzi abafanele be- "Zombies without Borders" ekusakazweni kwethu bukhoma. Ngale ndlela, sibheka ukuhlelwa kokusebenza kwezinto ezisebenzisanayo futhi sisabele masishane kuzinguquko ekusakazeni bukhoma lapho kunenkinga khona.
I-Graphics ne-logo: https://web.facebook.com/SNOB.desillustration